China Portable seza misy kodiarana amidy maivana miforitra seza misy kodiarana amin'ny Swing Away Footrest Manual mpanamboatra sy mpamatsy |Hemeikaineng
Varotra seza misy kodiarana azo entina seza misy kodiarana maivana miforitra miaraka amin'ny seza misy kodiarana an-tongotra miala lavitra
Ny fehin-tànana vy, vita volafotsy voaomana;Ny atitany Nylon dia mateza, maivana, tsara tarehy ary mora ny manadio.
Ny andian-dahatsoratra ergonomika dia manome endrika tonga lafatra hifanaraka amin'ny vatan'olombelona mba hanamaivanana ny tsindry, hampitombo ny fanamafisana, fizarana lanja ary hampihenana ny mety hisian'ny fery sy scoliose.Miondrika toy ny rafitra fipetrahana miendrika s manome fanohanana manohitra ny slippage.Angamba ianao mitady koaIncontinence Bed Pad Adult,Syringe azo ampiasaina miaraka amin'ny fanjaitra,Nebulizer portable misy bateria azo zaraina, Massage Cushion ShiatsuSns
Hevitry ny vokatra
1.bracket seza misy kodiarana kokoa
2.Ingay ny rafi-potika
3. Efitrano fitehirizana kely kokoa
4 Ny Rafitra Brackes dia manome antoka ny fiarovana
Rear tanana frein
Fampiharana ny famolavolana frein,
frein tanana aoriana,
HO AN'NY FAHASALAMANA ANAREO
Mora aforitra, mora tehirizina
Ny firaka manezioma ambany sy ny tanjaka avo dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiaramanidina, ny aerospace ary ny rocket.Izy io dia fitaovana maivana indrindra amin'ireo metaly azo ampiharina rehetra.
Fahazavana mahery tsy mila fitaovana
Anaran'ny vokatra seza misy kodiarana miforitra
Famaranana ambonin'ny tany Nofonosina Chrome
Sakan'ny seza 46 sm
Aforitra Habe 86*23*87 sm
Haben'ny mpampiantrano 96*65*87cm
Haben'ny fonosana 93*21*87cm
Lanja afa-karatsaka 16 kg
Lanja tsy afa-karatsaka 18 kg
(1) Misy santionany ho anao hizaha toetra ny kalitao sy ny tsena.
(2) Serivisy OEM: Logo manokana an'ny mpanjifa, Boaty loko ary Boky Torolàlana.Tsy maninona ny manova loko araka izay tianao ho an'ny filaharana faobe.
(3) Valio haingana ary manome serivisy feno sy feno eritreritra.
2. Vidin'ny varotra mivantana avy amin'ny orinasa.
3. antoka kalitao.
4. Alefaso haingana.
5. Manana serivisy tsara aorian'ny varotra izahay.
6. Efa ela izahay no nanompo hopitaly lehibe an-trano.
7. Mihoatra ny 10 taona ny traikefa momba ny varotra amin'ny indostrian'ny fitsaboana.
8. Tsy misy MOQ ho an'ny ankamaroan'ny vokatra, ary ny vokatra namboarina dia azo alefa haingana.
teo aloha: 2021 avo lenta Shina ambongadiny FDA CE mankasitraka mari-pana ara-pitsaboana nomerika handriny Contactless Infrared Thermometer
Manaraka: Ao amin'ny tahiry Electronic Arm Pressure Monitor Digital Sphygmomanometer Heart Rate Pulse Meter BP Monitor
Charger mpanelanelana mijoro mijoro sembana A...
Joystick Controller ho an'ny fiakarana tohatra azo entina...
Miforitra seza misy kodiarana maivana maivana Joysti...